Home » Vaovao momba ny fizahan-tany an'ny governemanta sy ny sekolim-panjakana » Amerika latina: mpitazana sa mpilalao sarimihetsika amin'ny fikambanana iraisam-pirenena?
Ny fivoaran'ny daty tsy ara-dalàna sy ny tsy fahafahan'ny minisitry ny fizahan-tany maro mankany Madrid, dia mamindra ny solontenan'ny fanjakana mpikambana amin'ny masoivohon'izy ireo amin'ny fifidianana ny sekretera jeneraly ho an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany (UNWTO). Miaraka amin'ny foiben-toeran'ny UNWTO any Madrid, Espana, ity dia manohana ny sekretera jeneraly ankehitriny, satria tsy ny firenena rehetra no manana masoivoho monina any Espana, ka ireo izay efa any Espana dia manomboka ny fifidianana amin'ny fitarihana mavesatra tsy ara-drariny.
Ny drafitra fanarenana aorian'ny areti-mandringana any Amerika Latina dia misy andry sasany. Anisan'izany ny fanarenana ny fizahan-tany. Ity dia olana manerantany noho ny krizy fitaterana an'habakabaka. Tsy mety ny mieritreritra fa azo vahana amin'ny hetsika roa tonta. Andraikitra lehibe iray azon'ny UNWTO (World Tourism Organization) natsangana tamin'ny 1974 ary firenena 19 amerikana latina no nanatevin-daharana hatramin'ny voalohany.
Ity fikambanana ity dia eo alohan'ny fifidianana ny sekretera jeneraly ao aminy. Ny anjara andraikitry ny fikambanana amin'ny famerenana amin'ny laoniny izao tontolo izao aorian'ny areti-mandringana dia mitaky ny hahatonga azy ho olona manana fahatokisana sy manan-kaja lehibe.
Mampalahelo fa tsy navelan'ny areti-mandringana hanaraka izany ny fizotrany, saingy misy ny singa sasany tsy azon'ny governemanta atao ny tsy miraharaha izany.
Ny fanovana ny tetiandrom-pifidianana, izay nohamarinina tamin'ny daty voatondro ho an'ny foara FITUR manan-danja ao Madrid, dia notazonina na dia teo aza ny areti-mandringana nahatonga ny fanemorana izany Fair hatramin'ny Mey. Izany, izay adikan'ny maro ho fikasana hanilika ny fampisehoana ireo kandidà solon'anarana mahery vaika, dia tsy nanakana ny fanjakana kely amin'ny Helodrano - Bahrain - hanolotra izay efa nahazo fanohanana tao amin'ny 2 amin'ireo mpikambana amerikana latina 5 ao amin'ny Executive Council of ny UNWTO.
Ny fivoaran'ny daty tsy ara-dalàna sy ny tsy fahafahan'ny minisitry ny fizahan-tany maro mankany Madrid, dia hamindra ny solontenan'ny fanjakana mpikambana any amin'ny ambasadaoron'izy ireo. Manohana ny sekretera jeneraly ankehitriny io, satria tsy ny firenena rehetra no manana ambasadaoro monina any Espana ary ny fifandraisana manokana dia afaka mitarika amin'ny alàlan'ny latsa-bato miafina haneho ny vato mifanohitra amin'ireo famantarana sy toerana ofisialin'ny firenena solontena.
Ny fanohanan'ny sekretera jeneraly ankehitriny ny fanapahan-kevitry ny fifidianana tamin'ny volana janoary dia notsikeraina tamin'ny taratasy misokatra nataon'ny sekretera jeneraly roa farany an'ny UNWTO. Ny tsy fahita firy amin'ny fidirana an-tsehatra amin'io natiora io, na amin'ny fiteny marina diplaomatika aza, dia porofo mivaingana amin'ny maha-matotra ny raharaha.
Ny fampielezan-kevitry ny sekretera jeneraly ankehitriny dia voatsikera mavesatra noho ny tsy fahita amin'ny olana ary miaraka amin'ny fiampangana azy ho nampiasa andrim-panjakana andrim-panjakana ho an'ny fampielezan-kevitra, mitsidika ireo firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO Executive Council ary manararaotra ireo fitsidihana voafantina hahazoana fampanantenana sy fanoloran-tena raha misy ny fifidianana.
Amerika Latina dia mitazona ny fiadidian'ny Filankevitra amin'ny alàlan'i Chile, firenena iray amin'ireo fomban-drazana lehibe indrindra amin'ny fandavana ny kolikoly ary faharoa amin'ny lisitr'ireo fahitana ny kolikoly eto amin'ny kaontinanta. Ny sary toa izany dia tsy azo lotoina satria ny tsaho milaza fa nahazo fampanantenana lehibe izy.
Amerika Latina dia manana vitsy an'isa manan-danja avy amin'ny faritra jeografikan'ny kandidà hafa. Ny endriny farany ambony indrindra dia efa imbetsaka na dia ny mpitsara ambony indrindra ao amin'ny firenena aza. Mety ho loharanon'ny fangorahana izany ny filatsahan'i HE Mai Al Khalifa, fa tsy fepetra politika.
Inona izany, ny fanamafisana ny filàn'ity fanendrena ity mba hangarahara, madio ary tsy hisalasalana momba ny fihetsika mety hisy fiatraikany amin'ny sarin'ny fikambanana fa ny rafitry ny Firenena Mikambana. Ny taona vitsivitsy lasa izay dia sarotra ho an'ny Firenena Mikambana na teo amin'ny ambaratongan'ny Firenena Mikambana mihitsy na tamin'ireo fikambanana toa ny UNESCO na ny OMS.
Tsy ilaina ny fifidianana maika hanampiana fikambanana iray hafa ao anatin'io lisitra io, ary ny fotoana dia ahafahana mankasitraka ny fototry ny tsikera voalaza ihany. Ity dia tokony ho tombontsoan'ny sekretera jeneraly koa.
Amerika Latina dia nifamatotra hatrany tao amin'ny UNWTO araka ny hita avy amin'ireo tranga nifidy ny mpikambana solontenany tao amin'ny Executive Council. Izy io dia afaka mitana andraikitra lehibe amin'ity safidy ity, ary tombony ho azy ny tsy ho mpandalo fotsiny. Marina izany ho an'ireo firenena mpikambana ao amin'ny Executive Council ary koa ho an'ireo izay tsy misy ankehitriny.
Niantso ny tambajotran'izao tontolo izao momba ny fizahantany Fahamendrehana amin'ny fifidianana UNWTO ary nahazo fanohanana manerantany ny fampielezan-keviny.